सरकारले देशभर धुमपान प्रतिबन्ध लगाउने तयारी – List Khabar
Home / समाचार / सरकारले देशभर धुमपान प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
सरकारले देशभर धुमपान प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
admin December 11, 2021 समाचार Leaveacomment 54 Views
एजेन्सी : न्युजिल्यान्डमा सू’र्तिज’न्य प’दा’र्थको विक्रीमा प्र’तिब’न्ध लगाइने भएको छ । धु’मपा’नलाई रोक लगाउने पहलस्वरुप पहिलो चरणअन्तर्गत सन् २००८ पछि जन्मिएका व्यक्तिले सू’र्ति’ज’न्य प’दा’र्थ किन्न नपाउने कानुन ल्याउन लागिएकाे हाे ।
सो कानुन नयाँ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा अ‍ाउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘सरकारले युवाहरुलाई धु’माप’नबाट जोगाउने सुनिश्चित गर्न पहिलो चरणमा बालबालिकालाई विक्री नगर्ने कानुन ल्याएको हो,’ स्वास्थ्यमन्त्री डा आयसा भरलले भने ।
सरकारले विस्तारै सम्पूर्ण उमेर समूहका मानिसहरुलाई धु’मपा’नमा प्रतिबन्ध लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारको कदमको चिकित्सक र स्वास्थ्य विज्ञहरुले स्वागत गरेका छन् ।
‘सरकारको कदमले सू’र्तिज’न्य प’र्दा’थ विक्रीमा कमी आउने र कम हा’निका’रक उत्पादन उपभोग गर्न सहयोग गर्नेछ । सरकारको पछिल्लो कदमले युवाहरुलाई कू’लतबाट पनि जोगाउनेछ,’ युनिभर्सिटी अफ ओटागोका प्राध्यापक जेनेट हुकले भने ।
न्युजिल्यान्डले धुमपानको राष्ट्रिय दरलाई सन् २०२५ सम्ममा ५ प्रतिशतमा झा’र्ने र त्यसपछि विस्तारै निर्मूल गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
अहिले न्युजिल्यान्डका १३ प्रतिशत वयस्कले धुमपान गर्छन् । एक दशकअघिसम्म १८ प्रतिशतले धुमपान गर्दथे । तर, आदिवासी जनजाति समुदायमा भने यो दर उच्च छ । धुमपानकै कारण ३१ प्रतिशत जनजाति धुमपानका कारण हुने श्वा’सप्रश्वा’सस’म्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् ।
धुमपानका कारण न्युजिल्यान्डका हरेक चार जनामध्ये एक जनामा क्या’न्सर हुने गरेको र सू’र्तिज’न्य प’र्दा’थका कारण ५० लाख मानिसमा स्वास्थ्य समस्या आएको जनाइएको छ ।
सरकारको नयाँ योजनाअन्तर्गत सू’र्तिज’न्य प’दा’र्थ वि’क्री गर्ने पसलहरुलाई आठ हजारबाट ५०० मा झार्ने तयारी छ ।
Previous ह्वात्तै बढ्यो इसीडी, विद्या’लय कर्मचारी र लेखापालको तलब भत्ता ! कति पुग्यो ?
Next मृ’त श्रीमतीको लाशसँग ६ रात,यति सम्म शोच्न नसकिने काम गरे…